एमाले विभाजनपछि कुन प्रदेशमा को बलियो? « AayoMail
एमाले विभाजनपछि कुन प्रदेशमा को बलियो?
2021,6 September, 6:50 pm
काठमाडौं – सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न एक दिन समय बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्न प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका सदस्यहरूलाई मंगलबारसम्मको समय दिएको हो।
नयाँ दल रोज्न पाउन एक दिन समय बाँकी छँदासम्म नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा धक्का लागेको छ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेका १४ प्रदेश सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन्। सोमबार माया तामाङ बोहोराले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि सुदूरपश्चिममा एमाले अब सभामुखसहित ११ सांसदमा सीमित भएको छ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको राम्रो पकड मानिन्छ। दल विभाजन हुँदा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथ छोडेर उनी एमालेमै बसे। तर, सुदूरपश्चिममा रावलले एमालेका प्रदेश सांसद जोगाउन असफल भएका छन्।
प्रेम आलेको साथ पाएका नेपाल त्यहाँ रावलभन्दा बढी शक्तिशाली देखिए। सोमबार बोहोराले एमाले त्यागेपछि सुदूरपश्चिममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।
सुदूरपश्चिम जस्तै क्षति नेकपा एमालेले प्रदेश २ प्रदेशसभामा पनि ब्यहोर्नु परेको छ। १३ प्रदेश सांसदले नयाँ दल रोजेपछि प्रदेश २ प्रदेशसभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमालेभन्दा ठूलो दल बनेको छ।
प्रदेश २ का २१ प्रदेश सांसदमध्ये १३ जना नयाँ दल रोजेपछि एमाले ८ सांसदमा सीमित भएको छ। प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका संघीय सांसद रघुवीर महासेठ, पूर्वमन्त्रीहरू लीलानाथ श्रेष्ठ, जुलीकुमारी महतो, राष्ट्रियसभा सदस्य एवं प्रदेश कमिटीका सचिव सुमन प्याकुरेलजस्ता प्रभावशाली नेताहरू प्रदेश सांसदहरूलाई एमालेमै रोक्न असफल भएका छन्।
यता गण्डकीमा एकजनाले पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सनाखत गरेका छैनन् भने लुम्बिनीमा एक प्रदेश सांसदलेमात्र एमाले छाडेका छन्।
प्रदेश १ मा एमालेका ५१ मध्ये १० जना नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा गएका छन्। यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका भीम आचार्य र योगेश भट्टराई एमालैमै बसेकाले थप क्षतिबाट एमाले जोगिएको हो। यद्यपि, प्रदेश १ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति बनिसकेको छ।
यसैगरी बागमती प्रदेशमा ५६ मध्ये १३ प्रदेश सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन्। पार्टी एकताको पक्षधर मध्यमार्गी धारको प्रभाव बागमतीमा पनि देखिएको छ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तलगायतका नेताहरू एमालेमै रहेकाले थप प्रदेश सांसदहरू रोकिएका छन्।
यता कर्णालीमा एमालेका १६ मध्ये तीन प्रदेश सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन्। यसअघि फ्लोर क्रस गरेका नेपाल पक्षीय चार एमाले सांसदले पद गुमाइसकेका छन्। तीनजनाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि कर्णालीमा एमाले प्रदेश सांसदको संख्या १३ मा खुम्चिएको छ।
दल विभाजन हुनुअघि सातवटै प्रदेश गरी एमाले प्रदेश सांसदहरूको संख्या २३३ थियो। सनाखतका लागि एक दिन समय बाँकी छँदासम्म एमालेका ५४ प्रदेश सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन्। यो कुल प्रदेशसभा सदस्यहरूको २३ प्रतिशत हो।
यसैगरी निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा एमालेका १५५ संघीय सांसदमध्ये ३० जनाले निवेदनमा हस्ताक्षर गर्दा लगभग २० प्रतिशत संख्या पुगेको थियो। दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा हस्ताक्षर नगरेका थप चार संघीय सांसदको सनाखत गर्न आयोगले मानेको थिएन।